Akụkọ - Ihe ngosi CIOSH 2021
Naịlọn Safety gbachiekwa
Aluminom Safety gbachiekwa
Bọọlụ Valve Lockout
Ọnụ ụzọ ámá Valve Lockout
Butterfly valvụ Lockout
Flanged Ball valvụ Lockout
Ọdụdọ & Pneumatic Lockout
Circuit emebi Lockout
Mkpọchi Box & Akpa
Ihe ngosi CIOSH 2021
Lockey ga-ekere òkè na ngosi ngosi CIOSH nke emere na Shanghai, China, na 14-16th, Apr., 2021.
Nọmba nkwụnye 5D45.
Nabata ileta anyị na Shanghai.
Banyere onye nhazi:
China Textile Commerce Association (CHINA TEXTILE COMMERCE ASSOCIATION) bụ otu ụlọ ọrụ mba na-enweghị uru na nnabata nke Mịnịstrị na-ahụ maka Ọrụ Ndị Mmadụ n’okpuru ntụzịaka nke Ndị Nlekọta Akụrụngwa na Nchịkwa nke Steeti.
Guzobe na 2009, Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd. (MDS) bụ enyemaka nke Messe Düsseldorf GmbH, otu n'ime ndị na-ahazi ihe ngosi elu ụwa. MDS kwadoro iwebata ụlọ ọrụ na-eduga ahịa ahịa na China ma na-enye ndị ahịa China na ndị ahịa mba ọzọ ọrụ ngosi ngosi.
Banyere ihe ngosi:
China International Ọrụ & Health ngwongwo Expo (CIOSH) bụ mba ahia ngosi ẹkenịmde ọ bụla mmiri na mgbụsị akwụkwọ site na mkpakọrịta kemgbe 1966. Na mmiri, ọ ga-ofu ẹkenịmde ke Shanghai; n'oge mgbụsị akwụkwọ ọ ga-abụ njem mba. Ugbu a, oghere ngosi ebe a karịrị 70,000 square mita, yana karịa ndị ngosi 1,500 na ndị ọkachamara ọkachamara 25,000.
Banyere nchekwa nchekwa na ngwongwo ahụike:
Ichebe nchekwa ndụ ndị ọrụ na ahụike ọrụ bụ isi na nghọta miri emi nke nchekwa nchekwa, yana isi ihe mepụtara nchekwa dị mma. Na usoro mmepụta, ụkpụrụ "ndị mmadụ na-elebara anya" ga-agbaso. Na mmekọrịta dị n'etiti mmepụta na nchekwa, ihe niile gbadoro ụkwụ na nchekwa, na nchekwa ga-abụ nke mbụ. Nchekwa ọrụ & ngwongwo ahụike (nke a makwaara dị ka "akụrụngwa nchedo onwe onye", nkenke mba ụwa "PPE") na-ezo aka na ihe nchekwa nke ndị ọrụ nyere iji zere ma ọ bụ belata mmerụ mberede ma ọ bụ nsogbu ọrụ na usoro mmepụta. Site na usoro nke igbochi, ịka akara, ịmịkọrọ mmiri, ịchụsasị na nkwụsịtụ, ọ nwere ike ichebe akụkụ ma ọ bụ ahụ niile pụọ na mwakpo mpụga. N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, iji ihe nchebe onwe onye bụ ihe nchebe dị mkpa. A na-ekewa ngwaahịa PPE n'ime ngwaahịa nchekwa ọrụ na ngwaahịa nchebe pụrụ iche.
nchedo isi, nchedo ihu, nchedo anya, nchedo ntị, nchedo iku ume, nchedo aka, nchedo ụkwụ, nchedo ahụ, nchebe nchebe dị elu dị elu, akụrụngwa nyocha, ịdọ aka ná ntị nchekwa na ngwa nchekwa metụtara ya, asambodo ngwaahịa, ọzụzụ nchekwa, wdg.
Adreesị:Owuwu D, Tangxia Mpaghara Mmeputa, North Baixiang Town, Yueqing, Zhejiang, China. Postal: 325603